Azonao atao izao ny mividy ny Honor Magic Watch 2 | Androidsis
Efa misy amin'ny fomba ofisialy any Espana, amin'ny alàlan'ny fivarotana an-tserasera nohavaozina, ireo vokatra telo efa natolotra tamin'ny volana febroary, avy amin'ny orinasa Honor. Momba ny smartphone Hajao ny 9X Pro, headphone tsy misy tariby TWS Magic Earbuds, ary ny smartwatch Magic Watch 2.
Fitaovana telo samy hafa, ny tsirairay amin'ny sehatra misy azy, nantsoina ho fahombiazan'ny varotra vaovao any Espana raha jerena ireo teo alohany. Honor, na eo aza ny olana amin'ny Huawei, manohy manana mpihaino eto amin'ny firenentsika. Ary misy ireo mpampiasa izay manohy miloka amin'ny vokatra izay manambatra kalitao tsara sy vidiny tsara.
1 Honor Magic Watch 2, miha mihatsara hatrany i Honor
2 Tsy manana NFC izy ireo, lesoka lehibe?
Honor Magic Watch 2, miha mihatsara hatrany i Honor
Amin'ireo vokatra vaovao telo izay efa azontsika vidina mivantana avy amin'ny tranonkalan'i Honor manokana dia nifantoka tamin'ny famantaranandro izahay. Ny kinova vaovao an'ny Honor Magic Watch Mbola mahaliana ihany izany raha jerena ny tombotsoany sy ny vidiny izay ahafahantsika mividy azy. Version izay estetika, na dia manaraka andalana iray mitovy amin'ny kinova voalohany aza, mivoatra miaraka amin'ny tsipika ankehitriny kokoa.
Ny mpiara-mianatra aminao mety amin'ny fanaraha-maso ny hetsika ara-panatanjahantena. Ny Honor Magic Watch 2 dia tonga lafatra amin'ny fahazoana angona marina avy amin'ny fanazaran-tena. Ary noho ny lanjany maivana, ary mifanentana amin'ny fehin-tànana noho ny tadiny, tsy ho hitanao fa mitafy azy ianao. Hitantsika habe roa, mitovy amin'ny kinova voalohany an'ny 42 MG, ary kinova lehibe kokoa miaraka amin'i 46 MG savaivony eo amin'ny tontolon'ny.
Ho an'ireo izay tia famantaranandro lehibe dia safidy tokony hodinihina ny 2mm Honor Magic Watch 46. Inona koa, ny kinova lehibe indrindra amin'ny habeny, manana bateria manana fahaiza-manao avo kokoa koa izy io. Manana izany isika fizakan izay tsy hanatonan'ny sasany akory. Afaka mampiasa ny Honor Magic Watch 2 isika hatramin'ny herinandro iray manontolo tsy misy fiampangana.
Tsy manana NFC izy ireo, lesoka lehibe?
Iray amin'ireo buts azontsika apetraka amin'ny kinova fanavaozana ny fitaovana iray izay efa vokatra tsara dia ny an'ny tsy nampihatra izany tamin'ny NFC. Fanampiny izay afaka nanitatra ny fahafaha-mampiasa, ka, ankoatry ny zavatra hafa, tsy afaka mandoa vola mivantana amin'ny famataranandro ianao ny fividianana carte de crédit antsika.
Hitantsika telo ny vidiny samy hafa arakaraka ny habeny, sy ny lokon'ny dial (sy ny tadiny) izay fidintsika. Ny kinova ara-toekarena kokoa, faritra mainty an'ny 42 MG ampahan'ny 169,99 €. Ary ny lafo kokoa, 42mm vidin'ny fandefasana volamena 199,99 €. Ny vidiny izay misy fihenam-bidy fampiroboroboana ao anatin'izany ny fanomezana mivantana amin'ny andro voalohan'ny volana Mey.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Azonao atao izao ny mividy ny Honor Magic Watch 2 vaovao